“Waxaad arki doontaan Real Madrid oo xoogan xilli ciyaareedka soo socda” – Kroos oo dhiirrigeliyay taageerayaasha Los Blancos – Gool FM
“Waxaad arki doontaan Real Madrid oo xoogan xilli ciyaareedka soo socda” – Kroos oo dhiirrigeliyay taageerayaasha Los Blancos
(Spain) 20 Maajo 2019. Xidiga khadka dhexe xulka qaranka Germany iyo Real Madrid ee Toni Kroos ayaa u balanqaaday taageerayaasha kooxdiisa in xilli ciyaareedka soo socda uu kaga duwanaan doon, kan haatan ay qaateen.
Hadalka Toni Kroos ayaa wuxuu yimid, kaddib shirka jaraa’id uu kaga soo muuqday heshiis kordhintiisa kooxda ka dhisan caasimada Madrid ee Los Blancos.
Waxaa jiray warar xan ah ee ku saabsan in Toni Kroos laga yaabo inuu ka tago Real Madrid xagaagan, si uu wadada ugu baneeyo saxiixyada cusub ee la filayo inay sameyso Los Blancos ee kala ah Christian Eriksen iyo Paul Pogba.
Laakiin maamulka kooxda Real Madrid ayaa wax walba beeniyay, kaddib markii ay shaaciyeen in Toni Kroos ay ka saxiixdeen heshiis cusub ee gaarsiisan ilaa iyo 2023.
Hadaba Toni Kroos ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday kaddib heshiiska cusub uu qalinka ku duugay wuxuu balan qaad u sameeyay taageerayaasha kooxda wuxuuna yiri:
“Kani wuxuu ahaa xili ciyaareed niyadjab ah, gaar ahaan marka aad caadeysato inaad xili kasta guuleysato, marka aad la kulanto xili ciyaareed noocaan oo kale ah, waxaad dareemeysaa niyadjab, laakiin waa wax iska caadi ah”.
“Waxaan u sheegayaa taageerayaasha kooxda, inaan ku soo laaban doono heerka ugu sareeya xilli ciyaareedka cusub, ma dhahayo waxaan ku guuleysan doonaa wax walba, sababtoo ah kama war qabo waxa dhici doona, balse waxaan isku dayi doonaa inaan sidaas sameyno”.
Maxaa ka jira wararka sheegaya in Icardi uu heshiis la gaaray Juventus? – waxaa ka jawaabeysa Wanda Nara oo ah xaaska iyo wakiilka laacibkan